ကမ္ဘာ့ဉာဏ် IQ အကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုဟ် (၁၀) ဦး – Gentleman Magazine
ကမ္ဘာ့ဉာဏ် IQ အကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုဟ် (၁၀) ဦး
လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဦးနှောက်ဟာ အထူးဆန်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သလို မရှိမဖြစ်အရေးပါတဲ့အစိတ်အပိုင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့လူတွေက ဦးနှောက်အရမ်းကောင်းကြပါတယ်။ သူတို့တွေကို တစ်ချို့က သာမန်ထက် ထူးခြားတဲ့လူတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာ ဉာဏ်အရမ်းကောင်းတဲ့လူတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ အဲဒီထဲကမှ ဉာဏ်ရည်ညွှန်းကိန်းအမြင့်ဆုံးလူဆယ်ယောက်ကို ကမ္ဘာ့ဉာဏ်အကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုဟ်တွေအဖြစ် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁။ Terence Tao
ဉာဏ်ရည်ညွှန်းကိန်း (IQ) = 230
Terence Tao ကတော့ အိုင်ကျူ ၂၃၀ နဲ့ ကမ္ဘာ့ဉာဏ်အထက်ဆုံးလူသားအဖြစ် ထိပ်ဆုံးမှာရှိနေပါတယ်။ သြစတြေးလျနိုင်ငံဖွား တရုတ်လူမျိုး အမေရိကန်သား Terence Tao ဟာ လေ့လာဆန်းစစ်မှုတွေ၊ ညီမျှခြင်းတွေ၊ သီအိုရီတွေများစွာကို လေ့လာဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့ သင်္ချာပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ၁၉၉၅ ခုနှစ် SAT စာမေးပွဲကို ရမှတ် ၇၆၀ နဲ့ အောင်မြင်ခဲ့ပြီး အသက် (၂၀)မှာ ပရင်စတန်တက္ကသိုလ်က ပါရဂူဘွဲ့ရရှိခဲ့ သလို အသက် (၂၄)နှစ်မှာ UCLA ရဲ့ အသက်အငယ်ဆုံး ပါမောက္ခတစ်ဦးလည်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
၂။ Christopher Harita
ဉာဏ်ရည်ညွန်းကိန်း (IQ) = 225
Christopher Harita ဟာဆိုရင်လည်း ကလေးဘ၀ထဲက ပါရမီထူးကဲသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ အသက်(၁၃)နှစ် အရွယ်မှာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရူပဗေဒအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲမှာ ရွှေတံဆိပ်ဆုရရှိခဲ့ပါတယ်။ အသက်(၁၆)နှစ်မှာ NASA ရဲ့ အင်္ဂါဂြိုဟ်လေ့လာရေးမစ်ရှင်တွေမှာ ပါဝင်ခဲ့ပြီး အသက်(၂၂)နှစ်မှာ ပရင်စတန်တက္ကသိုလ်ကနေ ပါရဂူဘွဲ့ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အခုဆိုရင် ကယ်လီဖိုးနီးယားနည်းပညာတက္ကသိုလ်မှာ ရူပနက္ခတ္တဗေဒဘာသာရပ်ကို သင်ကြားပြသပေးနေပါတယ်။
၃။ Kim Ung-Yong
ဉာဏ်ရည်ညွှန်းကိန်း (IQ) = 210
အိုင်ကျူ (၂၁၀)ရှိတဲ့ ကိုရီးယားလူမျိုး မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ Kim Ung-Yong ဟာ ကလေးဘ၀ထဲက ထူးခြားသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ အသက် (၆)လသားအရွယ်မှာ စကားပြောနိုင်ပြီဖြစ်ပြီး ကိုရီးယားဘာသာစကား အပါအ၀င်အခြား ဘာသာစကားတွေကိုပါ နားလည်နေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ အသက်(၃)နှစ်မှာတော့ ကိုရီးယား၊ ဂျပန်၊ ဂျာမန်နဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာတွေအပါအ၀င် ဘာသာစကားတော်တော်များများကို ဖတ်နိုင်နေပြီဖြစ်သလို ဂျပန်ရုပ်သံမှာတင်ဆက်တဲ့ ခက်ခက်ခဲခဲ သချာင်္ပုစ္ဆာတွေကိုလည်း ဖြေရှင်းနိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ Kim Ung-Yong ဟာ ကမ္ဘာ့ဂင်းနစ်စံချိန်စာအုပ်မှာ အမြင့်ဆုံးအိုင်ကျူရှိသူအဖြစ် စာရင်းဝင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။
၄။ Dr. Evangelos Katsioulis
ဉာဏ်ရည်ညွှန်းကိန်း (IQ) = 198
ဂရိနိုင်ငံသားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာ Evangelos Katsioulis ဟာ သူ့ရဲ့အိုင်ကျူမြင့်မားမှုကြောင့် လူသိများ ကျော်ကြားသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ အထွေထွေရောဂါနဲ့ စိတ်ရောဂါကု ဆရာဝန်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဆေးဖက်ဆိုင်ရာသုတေသနနည်းပညာဘွဲ့၊ ဒဿနိကဗေဒဘွဲ့နဲ့ စိတ်ရောဂါဆိုင်ရာဆေးဝါဗေဒဘွဲ့ တွေကိုလည်း ရရှိထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နိုင်ငံတကာ အိုင်ကျူမြင့်သူများအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ World Intelligence Network ရဲ့ တည်ထောင်သူ ဖြစ်သလို ဂရိနိုင်ငံအတွင်း ထူးခြားအရည်အချင်းရှိသူတွေကို မြေတောင်မြှောက်ပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်း AAAA. GR ရဲ့ လမ်းပြရှေ့ဆောင်တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
၅။ Christopher Langan
ဉာဏ်ရည်ညွှန်းကိန်း (IQ) = 195
အမေရိကန်နိုင်ငံသားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Christopher Langan ကတော့ အမေရိကန်မှာရော ကမ္ဘာမှာပါ အတော်ဆုံးလူသားအဖြစ် မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြခြင်းခံရသူတစ်ဥိးဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာဆိုရင် အသက်(၆)လမှာ စကားစပြောပြီး အသက်သုံးနှစ်မှာ သူ့ဟာသူ စာဖတ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ စိတ်နဲ့တကယ်လက်တွေ့ ဆက်စပ်မှု သီအိုရီကို လေ့လာဖော်ထုတ်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။
၆။ Rick Rosner
ဉာဏ်ရည်ညွှန်းကိန်း (IQ) = 192
အိုင်ကျူ ၁၉၂ ရှိပေမယ့် ဘယ်လိုမှမထင်ရလောက်အောင် ရိုးရှင်းတဲ့ပုံစံရှိတဲ့ Rick Rosner ဟာ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ ဘ၀ကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရပြီး အရက်ဘားတစ်ခုမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုဆိုရင်တော့ သူဟာ ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ CHiPs ကို စီစဉ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်နေပြီဖြစ်သလို ဂြိုဟ်တုရုပ်သံလိုင်းတစ်ခုကိုလည်း ထုတ်လွှင့်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
၇။ Mislav Predavec
ခရိုအေးရှားနိုင်ငံသား သင်္ချာပါမောက္ခတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Mislav Predavec ကတော့ ကမ္ဘာ့ဉာဏ်အကောင်းဆုံး လူစာရင်းမှာ အဆင့်(၇)နေရာမှာ ရပ်တည်နေပါတယ်။ သူဟာ ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့ ပိုင်ရှင်လည်း ဖြစ်သလို ဉာဏ်အကောင်းဆုံးလူတွေစုစည်းပြီးဖွဲ့စည်းထားတဲ့ GenerIQ Society ရဲ့ တည်ထောင်သူ ဥက္ကဌလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
၈။ Marilyn vos Savant
ဉာဏ်ရည်ညွှန်းကိန်း (IQ) = 190
Marilyn vos Savant ကတော့ Parade မဂ္ဂဇင်းရဲ့ လူသိများကျော်ကြားတဲ့ ကော်လံစားစာရေးဆရာမတစ်ဦး ဖြစ်ပြီး အိုင်ကျူအကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးအဖြစ် (၅)နှစ်ဆက်တိုက် ရပ်တည်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ အိုင်ကျူကို စစ်ဆေးခဲ့ရာမှာ အမြင့်ဆုံးရလဒ် (၂၂၈)အထိရရှိခဲ့ဖူးပေမယ့် (၁၉၈၅) ဂင်းနစ်ကမ္ဘာ့စံချိန်စာအုပ်မှာတော့ သူမရဲ့ အိုင်ကျူကို (၁၉၀)လို့ပဲ ဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာ Ask Marilyn အစီအစဉ်ကနေ စာဖတ်ပရိသတ်တွေရဲ့ မေးမြန်းသမျှကိစ္စတွေကို ပြန်လည်ဖြေကြားပေးနေသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
၉။ Philip Emeagwali
ဉာဏ်ရည်ညွန်းကိန်း (IQ) = 190
Philip Emeagwali ဟာ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံမှာ မွေးဖွားခဲ့တဲ့ အင်ဂျင်နီယာ၊ သင်္ချာပညာရှင်၊ ကွန်ပျူတာပညာရှင်၊ ဘူမိဗေဒပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာဆိုရင် ရေနံတွင်းတွေကိုရှာဖွေဖို့ ဆူပါကွန်ပျူတာတွေကို အသုံးပြုတွက်ချက်နိုင်သူဖြစ်တဲ့အတွက် ဆုတွေတောင် ရရှိခဲ့ပါတယ်။
၁၀။ Garry Kasparov
Garry Kasparov ဟာ ရုရှားနိုင်ငံသား စစ်တုရင်ဂရင်းမာစတာတစ်ဦးဖြစ်ပြီး (၂၀၀၃)ခုနှစ်အတွင်းမှာ တစ်စက္ကန့်ကို အကွက်ပေါင်း(၃)သန်းအထိ တွက်ချက်နိုင်တဲ့ ကွန်ပျူတာကို အနိုင်ယူပြခဲ့တဲ့အတွက် တစ်ကမ္ဘာလုံးကို အံ့သြသွားစေခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ အသက်(၂၂)နှစ်အရွယ်မှာတင် ကမ္ဘာစစ်တုရင်ချန်ပီယံ Anatoly Karpov ကို အနိုင်ယူပြီး အသက်အငယ်ဆုံး ကမ္ဘာ့စစ်တုရင်ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
လူ့ခန်ဓာကိုယျမှာ ဦးနှောကျဟာ အထူးဆနျးဆုံးအစိတျအပိုငျးဖွဈသလို မရှိမဖွဈအရေးပါတဲ့အစိတျအပိုငျးလညျး ဖွဈပါတယျ။ တဈခြို့လူတှကေ ဦးနှောကျအရမျးကောငျးကွပါတယျ။ သူတို့တှကေို တဈခြို့က သာမနျထကျ ထူးခွားတဲ့လူတှအေဖွဈသတျမှတျကွပါတယျ။ ကမ်ဘာမှာ ဉာဏျအရမျးကောငျးတဲ့လူတှေ အမြားကွီးရှိပါတယျ။ အဲဒီထဲကမှ ဉာဏျရညျညှနျးကိနျးအမွငျ့ဆုံးလူဆယျယောကျကို ကမ်ဘာ့ဉာဏျအကောငျးဆုံးပုဂ်ဂိုဟျတှအေဖွဈ ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
ဉာဏျရညျညှနျးကိနျး (IQ) = 230
Terence Tao ကတော့ အိုငျကြူ ၂၃၀ နဲ့ ကမ်ဘာ့ဉာဏျအထကျဆုံးလူသားအဖွဈ ထိပျဆုံးမှာရှိနပေါတယျ။ သွစတွေးလနြိုငျငံဖှား တရုတျလူမြိုး အမရေိကနျသား Terence Tao ဟာ လလေ့ာဆနျးစဈမှုတှေ၊ ညီမြှခွငျးတှေ၊ သီအိုရီတှမြေားစှာကို လလေ့ာဖျောထုတျခဲ့တဲ့ သင်ျခြာပညာရှငျတဈဦးဖွဈပါတယျ။ သူဟာ ၁၉၉၅ ခုနှဈ SAT စာမေးပှဲကို ရမှတျ ရ၆၀ နဲ့ အောငျမွငျခဲ့ပွီး အသကျ (၂၀)မှာ ပရငျစတနျတက်ကသိုလျက ပါရဂူဘှဲ့ရရှိခဲ့ သလို အသကျ (၂၄)နှဈမှာ UCLA ရဲ့ အသကျအငယျဆုံး ပါမောက်ခတဈဦးလညျးဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။
ဉာဏျရညျညှနျးကိနျး (IQ) = 225
Christopher Harita ဟာဆိုရငျလညျး ကလေးဘဝထဲက ပါရမီထူးကဲသူတဈဦးဖွဈပါတယျ။ အသကျ(၁၃)နှဈ အရှယျမှာ အပွညျပွညျဆိုငျရာ ရူပဗဒေအိုလံပဈပွိုငျပှဲမှာ ရှတေံဆိပျဆုရရှိခဲ့ပါတယျ။ အသကျ(၁၆)နှဈမှာ NASA ရဲ့ အင်ျဂါဂွိုဟျလလေ့ာရေးမဈရှငျတှမှော ပါဝငျခဲ့ပွီး အသကျ(၂၂)နှဈမှာ ပရငျစတနျတက်ကသိုလျကနေ ပါရဂူဘှဲ့ရရှိခဲ့ပါတယျ။ အခုဆိုရငျ ကယျလီဖိုးနီးယားနညျးပညာတက်ကသိုလျမှာ ရူပနက်ခတ်တဗဒေဘာသာရပျကို သငျကွားပွသပေးနပေါတယျ။
ဉာဏျရညျညှနျးကိနျး (IQ) = 210
အိုငျကြူ (၂၁၀)ရှိတဲ့ ကိုရီးယားလူမြိုး မွို့ပွအငျဂငျြနီယာ Kim Ung-Yong ဟာ ကလေးဘဝထဲက ထူးခွားသူတဈဦးဖွဈပါတယျ။ အသကျ (၆)လသားအရှယျမှာ စကားပွောနိုငျပွီဖွဈပွီး ကိုရီးယားဘာသာစကား အပါအဝငျအခွား ဘာသာစကားတှကေိုပါ နားလညျနခေဲ့သူဖွဈပါတယျ။ အသကျ(၃)နှဈမှာတော့ ကိုရီးယား၊ ဂပြနျ၊ ဂြာမနျနဲ့ အင်ျဂလိပျဘာသာတှအေပါအဝငျ ဘာသာစကားတျောတျောမြားမြားကို ဖတျနိုငျနပွေီဖွဈသလို ဂပြနျရုပျသံမှာတငျဆကျတဲ့ ခကျခကျခဲခဲ သခြာင်ျပုစ်ဆာတှကေိုလညျး ဖွရှေငျးနိုငျနပွေီဖွဈပါတယျ။ Kim Ung-Yong ဟာ ကမ်ဘာ့ဂငျးနဈစံခြိနျစာအုပျမှာ အမွငျ့ဆုံးအိုငျကြူရှိသူအဖွဈ စာရငျးဝငျခဲ့သူလညျးဖွဈပါတယျ။
ဉာဏျရညျညှနျးကိနျး (IQ) = 198
ဂရိနိုငျငံသားတဈဦးဖွဈတဲ့ ဒေါကျတာ Evangelos Katsioulis ဟာ သူ့ရဲ့အိုငျကြူမွငျ့မားမှုကွောငျ့ လူသိမြား ကြျောကွားသူတဈဦးဖွဈပါတယျ။ သူဟာ အထှထှေရေောဂါနဲ့ စိတျရောဂါကု ဆရာဝနျတဈဦးဖွဈပွီး ဆေးဖကျဆိုငျရာသုတသေနနညျးပညာဘှဲ့၊ ဒဿနိကဗဒေဘှဲ့နဲ့ စိတျရောဂါဆိုငျရာဆေးဝါဗဒေဘှဲ့ တှကေိုလညျး ရရှိထားပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ နိုငျငံတကာ အိုငျကြူမွငျ့သူမြားအဖှဲ့အစညျးတဈခုဖွဈတဲ့ World Intelligence Network ရဲ့ တညျထောငျသူ ဖွဈသလို ဂရိနိုငျငံအတှငျး ထူးခွားအရညျအခငျြးရှိသူတှကေို မွတေောငျမွှောကျပေးတဲ့အဖှဲ့အစညျး AAAA. GR ရဲ့ လမျးပွရှဆေ့ောငျတဈဦးလညျးဖွဈပါတယျ။
ဉာဏျရညျညှနျးကိနျး (IQ) = 195
အမရေိကနျနိုငျငံသားတဈဦးဖွဈတဲ့ Christopher Langan ကတော့ အမရေိကနျမှာရော ကမ်ဘာမှာပါ အတျောဆုံးလူသားအဖွဈ မီဒီယာတှရေဲ့ဖျောပွခွငျးခံရသူတဈဥိးဖွဈပါတယျ။ သူဟာဆိုရငျ အသကျ(၆)လမှာ စကားစပွောပွီး အသကျသုံးနှဈမှာ သူ့ဟာသူ စာဖတျနပွေီဖွဈပါတယျ။ သူဟာ စိတျနဲ့တကယျလကျတှေ့ ဆကျစပျမှု သီအိုရီကို လလေ့ာဖျောထုတျခဲ့သူလညျးဖွဈပါတယျ။
ဉာဏျရညျညှနျးကိနျး (IQ) = 192
အိုငျကြူ ၁၉၂ ရှိပမေယျ့ ဘယျလိုမှမထငျရလောကျအောငျ ရိုးရှငျးတဲ့ပုံစံရှိတဲ့ Rick Rosner ဟာ ခကျခဲကွမျးတမျးတဲ့ ဘဝကိုဖွတျသနျးခဲ့ရပွီး အရကျဘားတဈခုမှာ နှဈပေါငျးမြားစှာအလုပျလုပျခဲ့ပါတယျ။ အခုဆိုရငျတော့ သူဟာ ရုပျမွငျသံကွားအစီအစဉျတဈခုဖွဈတဲ့ CHiPs ကို စီစဉျထုတျလုပျသူဖွဈနပွေီဖွဈသလို ဂွိုဟျတုရုပျသံလိုငျးတဈခုကိုလညျး ထုတျလှငျ့နပွေီဖွဈပါတယျ။
ခရိုအေးရှားနိုငျငံသား သခငြ်ျာပါမောက်ခတဈဦးဖွဈတဲ့ Mislav Predavec ကတော့ ကမ်ဘာ့ဉာဏျအကောငျးဆုံး လူစာရငျးမှာ အဆငျ့(၇)နရောမှာ ရပျတညျနပေါတယျ။ သူဟာ ကုနျသှယျရေးလုပျငနျးတဈခုရဲ့ ပိုငျရှငျလညျး ဖွဈသလို ဉာဏျအကောငျးဆုံးလူတှစေုစညျးပွီးဖှဲ့စညျးထားတဲ့ GenerIQ Society ရဲ့ တညျထောငျသူ ဥက်ကဌလညျး ဖွဈပါတယျ။
ဉာဏျရညျညှနျးကိနျး (IQ) = 190
Marilyn vos Savant ကတော့ Parade မဂ်ဂဇငျးရဲ့ လူသိမြားကြျောကွားတဲ့ ကျောလံစားစာရေးဆရာမတဈဦး ဖွဈပွီး အိုငျကြူအကောငျးဆုံးအမြိုးသမီးအဖွဈ (၅)နှဈဆကျတိုကျ ရပျတညျခဲ့သူဖွဈပါတယျ။ သူမရဲ့ အိုငျကြူကို စဈဆေးခဲ့ရာမှာ အမွငျ့ဆုံးရလဒျ (၂၂၈)အထိရရှိခဲ့ဖူးပမေယျ့ (၁၉၈၅) ဂငျးနဈကမ်ဘာ့စံခြိနျစာအုပျမှာတော့ သူမရဲ့ အိုငျကြူကို (၁၉၀)လို့ပဲ ဖျောပွထားခဲ့ပါတယျ။ သူမဟာ Ask Marilyn အစီအစဉျကနေ စာဖတျပရိသတျတှရေဲ့ မေးမွနျးသမြှကိစ်စတှကေို ပွနျလညျဖွကွေားပေးနသေူလညျး ဖွဈပါတယျ။
ဉာဏျရညျညှနျးကိနျး (IQ) = 190
Philip Emeagwali ဟာ နိုငျဂြီးရီးယားနိုငျငံမှာ မှေးဖှားခဲ့တဲ့ အငျဂငျြနီယာ၊ သခငြ်ျာပညာရှငျ၊ ကှနျပြူတာပညာရှငျ၊ ဘူမိဗဒေပညာရှငျတဈဦးဖွဈပါတယျ။ သူဟာဆိုရငျ ရနေံတှငျးတှကေိုရှာဖှဖေို့ ဆူပါကှနျပြူတာတှကေို အသုံးပွုတှကျခကျြနိုငျသူဖွဈတဲ့အတှကျ ဆုတှတေောငျ ရရှိခဲ့ပါတယျ။
Garry Kasparov ဟာ ရုရှားနိုငျငံသား စဈတုရငျဂရငျးမာစတာတဈဦးဖွဈပွီး (၂၀၀၃)ခုနှဈအတှငျးမှာ တဈစက်ကနျ့ကို အကှကျပေါငျး(၃)သနျးအထိ တှကျခကျြနိုငျတဲ့ ကှနျပြူတာကို အနိုငျယူပွခဲ့တဲ့အတှကျ တဈကမ်ဘာလုံးကို အံ့သွသှားစခေဲ့ပါတယျ။ သူဟာ အသကျ(၂၂)နှဈအရှယျမှာတငျ ကမ်ဘာစဈတုရငျခနျြပီယံ Anatoly Karpov ကို အနိုငျယူပွီး အသကျအငယျဆုံး ကမ်ဘာ့စဈတုရငျခနျြပီယံဖွဈခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
Previous: ကမ္ဘာ့ တန်ဖိုး အကြီးဆုံးကုန်အမှတ်တံဆိပ်(၁၀)ခု
Next: ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပျက်စီးချအစား ဆုံး နိုင်ငံ ၁၀ ခု